I-Apple iyehla kwindawo yesihlanu kwimakethi yaseTshayina ngenxa yokuthengisa okuphantsi | IPhone iindaba
I-Apple iwela kwindawo yesihlanu kwimakethi yaseTshayina ngenxa yentengiso esezantsi
Ngeentsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba u-Apple asibonise idatha enxulumene nokuthengiswa kwesixhobo kunye nengeniso abayifumene, inkampani esekwe eCupertino iyaqhubeka nokubona ukuba ukuthengiswa kwezixhobo zayo kuyaqhubeka ukwehla, ngakumbi kwintengiso yaseTshayina, apho inkampani Okwangoku ineevenkile ezingaphezu kwama-40 ezivulekileyo iintsuku ezisixhenxe ngeveki.
Ngokwedatha yamva nje epapashiweyo enxulumene nokuthengiswa kwezixhobo kwintengiso yaseTshayina, siyabona ukuba lUkuthengiswa kwe-iPhone kwawa ngoMeyi ukubeka inkampani emva kweHuawei, Vivo, Oppo kunye neXiaomi. Le datha iqokelelwe lupapasho lweBloomberg.
Kunyaka ophelileyo, ukuthengisa kuka-Apple kweli lizwe kuye kwavela kwi-12% ukuya kwi-10.8%. U-Huawei uye waba ngukumkani wentengiso kunye nesabelo sentengiso se-17.3% ngelixa umvelisi u-Oppo ephindaphinde isabelo sakhe sentengiso kwi-11%. Ezona ntengiso ziphezulu zine e China eYenziwe ngabavelisi bendawo abane: iHuawei, Vivo, Oppo kunye neXiaomi, ezimele kunye ezingama-53% yazo zonke izixhobo ezithengiswayo elizweni.
Kwinkomfa yokugqibela apho iApple ithi thaca iziphumo zezemali, inkampani esekwe eCupertino yanciphisa inzuzo yayo e-China ngama-26%, Ngelixa amanye amazwe aseAsia ukuwa kufikelela kwi-25% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. UApple uthe ukubonile ukuncitshiswa kweendlela zokuhambisa ngokuyinxenye ngenxa yokuhla kwemali kunye namanani okukhula ahluphekayo kweli lizwe.
Kule minyaka yangoku, I-China ayisakhuli njengoko bekwenzile kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Ngapha koko, ukukhula koqoqosho kubonakala ngathi kumile kwaye oko kuya kuthatha irhafu kwintengiso ye-iPhone, kuba inkampani yayikhethe i-China njengenye yeenjini zokukhula kwenkampani, iinjini ezihamba kancinci ziphela ipetroli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Apple iwela kwindawo yesihlanu kwimakethi yaseTshayina ngenxa yentengiso esezantsi
Mhlawumbi amaTshayina aqonda ukuba akufanelekanga ukuchitha imali eninzi kwifowuni enikezela ngamava omsebenzisi afanayo nalawo avela eHuawei okanye kwiXiaomi nakwisiqingatha sexabiso. I-Apple, ngenxa yoko ikubonisayo ngeli xesha, ayinakwenza ngathi ifumana inzuzo eyayiyenzile ngaphambili, xa imveliso yayo yayihlukile, inyani kukuba ukhuphiswano ligqithile kuyo.
I-Apple ikhupha i-tvOS 9.2.2 beta 5 kunye ne-OS X 10.11.6 beta 5
I-Apple ifuna ababoneleli bayo bexabiso ukuthoba amaxabiso e-iPhone 7